समाचार Archives - VOICE OF NEPAL
द भ्वाइस अफ नेपाल’ को लाइभ शोमा कर्णराज र सोनाम को प्रवेश
कोरोनाको कारण रोकिएको ‘द भ्वाइस अफ नेपाल ३’ फेरि सुरु भएको छ । शुक्रबारबाट कार्यक्रमको नकआउट चरणमा फेरि सुरु भएको हो । शुक्रबार प्रशारण भएको नकआउट चरणमा टिम तृष्णाबाट चर्चित गायक कर्णराज गिरी र टिम राजुबाट सोनाम शेर्पा लाइभ शोमा प्रवेश गरेका छन् । गिरीले यस अगाडि पनि शोमा प्रस्तुति दिइसकेका छन् । २ साता रोकिए प...
वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पतालबाट डिस्चार्ज, फेसबुकमा लेखे यस्तो स्टाटस
वरिष्ठ हाँस्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । दोस्रो लहरुको कोरोना संक्रमणको लहर बढेसँगै संक्रमित भएका श्रेष्ठले डिस्चार्ज भएपछिद्ध आफ्ना सुवेच्छुकहरुलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरेका छन्। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि उनले आफ्नो अनुभव पनि सामाजिक सञ्जालमा साझा गरेका छन् । उनको मेडिसिटि अस्पतालम...
जनताले धैर्यताको सिमा तोड्ने बेला आयोः रेखा थापा
काठमाडौं । कोरोना भाइरसले विश्वनै यतिबेला आक्रान्त बनेको छ । नेपालमा दैनिक सयौ मानिसहरुले संक्रमणबाट ज्यान गुमाएका छन् । दिनहुँ ८ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । बिरामीको उपचार गर्ने अस्पताल भरिएका छन् । अस्पतालमा बेड पाउनै मुस्किल छ, बेड पाएपनि अक्सिजनको अभाव छ । सरकार आफ्नो सिट कसरी जोगाउनेमा अल्झिएको कारण पनि...
आर्थर गनको रुपमा परिचित दिवेश पोखरेल विश्वकै चर्चित रियालिटी शो ‘अमेरिकन आइडल’को टप ७ बाट बाहिरिएका छन् । सोमबार सार्वजनिक भएको भोटिङमा कम भोट पाएपछि उनी बाहिरिएका हुन् । उनले, उत्कृष्ट ५ मा स्थान बनाउन सकेनन् । आइतबार मदर्स डे स्पेशल कार्यक्रममा उनले गाएको गीतले दर्शकको मन जितेन । दुई जना बाहिरिनु पर्ने शोको नि...
रहेनन् गायक प्रेमध्वज प्रधान !
काठमाडौँ। गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ । ८३ वर्षको उमेरका प्रधानको काठमाडौँ न्यूरो अस्पतालमा निधन भएको प्रधानका जेठान छायांकार मन्जुकुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठका अनुसार निधनको कारण भने हर्ट हट्याक हो । प्रधान दस दिनदेखि अस्पतालमै थिए । सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा सन् १९३८ मा जन्मिएका प्रधानले १६...
गायक राजु ढकाललाई दोस्रोपटक कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । लोकदोहोरी गायक राजु ढकाललाई दोस्रोपटक कोरोना संक्रमण भएको छ । आइतबार गायक ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूलाई दोस्रोपटक कोरोना संक्रमण भएको जानकारी दिनु भएकाे हाे । लगातार ज्वरो आएर टाउको र जिउ दुखेपछि शनिबार पीसीआर परीक्षण गर्दा उहाँमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । उहाँलाई गतवर्ष पनि कोरोना संक्रमण ...
गायक प्रशान्त तामाङलाई मातृशोक !
काठमाडौँ। गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङलाई मातृशोक परेको छ । प्रशान्त स्वयंमले आमाको निधन भएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका छन् । प्रशान्तकी आमाको दार्जीलिङस्थित घरमै निधन भएको हो । कहिले निधन भएकोबारे भने प्रशान्तले खुलाएका छैनन् । उनको बुवाको भने धेरै वर्ष पहिले सवारी दुर्घटनामा निधन भएको थियो । ...
काठमाडौं। नेपाली मूलका अमेरिकी गायक दिवेश पोखरेल उर्फ ‘अर्थर गन’ फेरि अमेरिकन आइडलमा सहभागि भएका छन् । अमेरिकन आइडलको मञ्चमा पुनरागमन गर्दै दिवेशले निकै नै दमदार प्रस्तुति पेश मात्र गरेनन्, उनको गायकीलाई निर्णायकमण्डलका तीनै जनाले उठेर ताली बजाउँदै, दिवेश स्टार कलाकार भएकामा प्रशंसा पनि गरे । अमेरिकन आइडल...